Budata Open Broadcaster Software - OBS maka Windows
Budata Open Broadcaster Software - OBS
Free Budata maka Windows (97.20 MB)
Budata Open Broadcaster Software - OBS,
Open Broadcaster Software, ma ọ bụ OBS na nkenke, bụ sọftụwia na - eweta nefu na - enyere ndị ọrụ aka ịgbasa na ịntanetị.
Nịbụ onye ọrụ mmeghe na-emeghe, OBS Studio na-enye ndị ọrụ ohere ịdekọ vidiyo ma gbasaa na ntanetị. Site nusoro ihe omume ahụ, ịnwere ike ịgbasa ihe oyiyi na kọmputa gị na ịntanetị, gbasaa egwuregwu ahụ ndụ ma chekwaa mgbasa ozi ndị a na kọmputa gị.
Open Broadcaster Software na akwado oru di iche iche maka mgbasa. Site niji Open Broadcaster Software, ị nwere ike ịgbasa ozi na Facebook, YouTube, Twitch, iNSTAGIB.tv, DailyMotion, CashPlay, CyberGame na ọrụ Hitbox. Open Broadcaster Software na-enye ndị ọrụ ohere idekọ vidiyo site na isi mmalite dị iche iche. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwere ike ịgbasa ihe ngosi mmịfe, gbakwunye isiokwu, ihe nkiri egwuregwu na agbasa ozi nikuku ma ọ bụ gbasaa kamera kamera gị site na iji Open Broadcaster Software. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịchekwa ma bipụta ngwa na-agba ọsọ na desktọọpụ gị.
Etu ị ga - esi bie egwu Facebook na PC
Ihe mara mma nke Open Broadcaster Software ga-enyere gị aka na ịdebe vidiyo vidiyo egwuregwu bụ na ngwa ahụ nwere ọnọdụ nlele nke na-egosi gị otu vidiyo gị ga-esi ele anya tupu ịdee ha. Nụzọ dị otú a, ị nwere ike ịme obere mmezi ma mee vidiyo gị ka ọ kacha mma.
Open Broadcaster Software na-enye ntọala ntọala zuru ezu maka ịgbasa ozi vidio na olu. Open Broadcaster Software, nke nwere nhọrọ ngbanwe dị iche iche, na-enye gị ohere ikpebi mkpebi iji gbasaa vidiyo, yana ịhọrọ nyocha a ga-agbasa, iji chọpụta ọnụego etiti (FPS). I nwekwara ike ime ntọala igwe okwu gị site na ngwa ahụ, gbanye ma ọ bụ gbanyụọ igwe okwu, ma setịpụ hotkeys.
Open Broadcaster Software na-enye gị ohere ịchekwa ntọala nke gị nụkpụrụ dị iche iche ma na-enye gị ohere ịgbanwe netiti ntọala ị ga-eji maka mgbasa ozi dị iche iche.
Open Broadcaster Software - OBS Ụdịdị
Nha faịlụ: 97.20 MB